Umhlahlandlela Wokusetshenziswa | I-Ryuko Memorial Hall
Kunemithambeka eceleni kwezitebhisi emnyango, kukhona indlu yangasese enezinhloso eziningi, kukhona okuqashwayo ngesihlalo esinamasondo, futhi kufakwa ne-AED.
Imali yokwamukelwa ikhishelwe ukusetshenziswa njengengxenye yemfundo yesikole
Abafundi besikole samabanga aphansi nabancane nabaholi babo bamahhala, futhi abafundi bezikole eziphakeme nabaholi babo bangeniswa ngentengo uhhafu wama-yen ayi-100.
Sicela uxhumane nathi njengoba uzodinga ukufaka isicelo kusengaphambili.
Kumahhala kubantu abangaphezu kweminyaka engama-65 ubudala (kudingeka ubufakazi)
Njengoba abantu abaneminyaka engama-65 nangaphezulu (kudingeka isitifiketi) mahhala, abantu abaningi ngokwengeziwe beza emnyuziyamu bezothola ukuzilibazisa kwenkonzo yosuku.Uma kunjalo, abanakekeli bangangena futhi emnyuziyamu mahhala.Sicela uxhumane nathi kusengaphambili.
Ngaphezu kwalokho, futhi samukela ukubhuka kweqembu
Imali yeqembu (abantu abangama-20 noma ngaphezulu) ngama-yen angama-160 kubantu abadala. Kungenwa mahhala kulabo abaneminyaka engaphezu kwengama-65 ngokwethula izitifiketi ezahlukahlukene.Ngaphezu kwalokho, esimweni sokubhuka kweqembu, singanikeza ukuqondiswa kwengadi nezincazelo ezilula zemisebenzi eqenjini elenze ukubhuka, ngakho-ke sicela uxhumane nathi kusengaphambili.